Uhlobo lweOasis, 'iReader' entsha enescreen kunye namanzi | Iindaba zeGajethi
URuben inyongo | | Amazon, ngokubanzi
I-Amazon ine-e-book reader entsha. Uluhlu lwakho lohlobo luyanda, njengobungakanani be Inguqulelo yamva nje. Umfundi omtsha Uye wabhaptizwa ngegama le-Kindle OasisIya kufumaneka kwiinguqulelo ezi-3 kwaye, njengenoveli, ungayisebenzisa phantsi kwamanzi.
I-Kindle Oasis ngumfundi oqinisekisiweyo we-IPX8. Oku kubangela ungayisebenzisa phantsi kwamanzi kubunzulu obuphezulu beemitha ezi-2 kunye nemizuzu engama-60. Emva kweli xesha, inkampani ayinakuqinisekisa ukuba isixhobo siyaqhubeka nokusebenza ngokuchanekileyo okanye ekugqibeleni amanye amanzi angena kwiisekethi zawo.
Ngakolunye uhlangothi, I-Kindle Oasis inyusa isikrini sayo kwii-intshi ezi-7 ezibonelela nge-300 dpi. Amagqabantshintshi eAmazon athi ngolu nyuso kunye nokusebenzisa ubungakanani befonti emiselweyo, ufumana amagama angama-30% ngaphezulu kwiphepha ngalinye. Ngamanye amagama, ukunciphisa iphepha kuyaphunyezwa. Ukongeza, awufanelanga ukhathazeke ngokufundwa ebusuku, kuba le modeli ine-backlight kwiscreen sayo ngenxa yokusetyenziswa kwee-LED ze-12.
I-Kindle Oasis incinci nge-aluminium ngasemva, iyinika ngaphezulu premium. Kwelinye icala, ungayifumana kwiinguqulelo ezi-3: enye inomthamo we-8 GB kunye ezimbini ze-32 GB. Ezi zimbini zokugqibela ziya kuba enye yazo ngoxhumano lwe-WiFi kwaye enye idibanisa i-WiFi kunye noxhumano lwe-3G ukuze ukwazi ukukhuphela iincwadi ngexesha olifunayo.
Kunye ne-Kindle Oasis ikwaziswa isiciko esitsha, sakuba sibekwe kwifayile ye- eReader, inokusetyenziswa njengenkxaso ukufunda kamnandi ngakumbi kumgangatho othe tyaba. I-Kindle Oasis iya kuthengiswa ngo-Okthobha u-31, nangona ngoku kunokwenzeka ukuyigcina kuzo zonke iindlela zayo - ikwinqanaba lokuthengisa kwangaphambili.
Amaxabiso ezi nguqulelo zintathu zezi zilandelayo: 249,99 euro imodeli ye-8 GB; 279,99 euro Imodeli ye-32 GB ngonxibelelwano lweWiFi; Y 339,99 euro Inguqulelo exhotyiswe kakhulu: i-32 GB yogcino lwangaphakathi kunye noqhagamshelo lweWiFi + 3G.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Amazon » Uhlobo lweOasis, 'iReader' entsha enescreen kunye namanzi
URazer angabonisa 'i-smartphone' yabadlala ngoNovemba 1